China Lower Loop Cut Mepere Obosara Jacquard Machine rụpụta na ụlọ ọrụ | Igwe Morton
Lower Loop Cut Open Obosara Jacquard Machine
Ịchọrọ ịchọta ọkachamara nrụpụta Lower Loop Cut Open Width Jacquard Machine maka nrụpụta akwa gị chọrọ?
Anyị nwere ike ịnye igwe nkenke dị larịị dị larịị Cut Mepee Obosara Jacquard iji kwekọọ na mkpa gị kacha mma.
Nke mbụ: Quanzhou, China
Tụkwasịnụ Ikike: 1000 Set kwa afọ
Asambodo: ISO9001, CE wdg
Voltaji: 380V 50Hz, voltaji nwere ike bụrụ ihe achọrọ mpaghara
Oge ịkwụ ụgwọ: TT, LC
Ụbọchị nnyefe: 30-35days
Nkwakọ ngwaahịa: ọkọlọtọ mbupụ
Ndị na -eri nri
1.Lower Loop Cut Open Width Jacquard Machine Iji ụgbọ elu aluminom alloy n'akụkụ akụkụ nke igwe iji melite arụmọrụ mgbasa ọkụ ma belata nrụrụ ike nke igbe cam.
2.Otu Stitch Ndozi.
3.nke Archimedes nkenke dị elu na-eme ka usoro mmegharị nke otu akwa dị na igwe dị iche iche dị mfe ma dị mfe.
4.ọdịdị ịkpụ kam na agịga agịga, dị mfe maka ngbanwe igwe, nwere ike idozi nsogbu ọdịnala dịka oke ogologo ogologo, ihe adịghị mma nke ikpo dị elu na nke dị ala, ọkpụrụkpụ na -enweghị oke, mmetụta ihicha ọjọọ.
Mkpokọta dị ala nwere ike rụọ ọrụ n'otu igwe na RPM dị elu, mmepụta nwere ike karịa 20% karịa ndị asọmpi ndị ọzọ.
6.Nhazi nke sistemụ njikwa na -etinye usoro nhazi micro kachasị elu, na -ejikọ usoro nhazi ngụkọ elektrọnik na igwe ihe eji eme kọmputa n'ime igwe.
7.Ọ na-eji ihe ngosi kristal na-emetụ mkpịsị aka aka (LCD), a na-edozi ya ngwa ngwa na-enweghị nnukwu ụlọ, nke na-eme ka igwe ahụ niile dị mma ma maa mma. Enweghị draịva chọrọ sọftụwia ịse pụrụ iche.
8. Igwe a nwere ike ịgbanwe ogologo akaghị site n'ịgbanwe kamera ma mezie ọnọdụ akụkụ oku, enweghị igwe mgbanwe na akụkụ ndị ọzọ. Ọ na -azọpụta ọnụ ahịa ndị ahịa anyị maka njikwa mmepụta na itinye ego.
9.Lower loop Cut Open Width Jacquard Machine bụ ihe pụrụ iche dabere na teknụzụ ọkachamara nke Jacquard Cut Pile Knitting Machine yana ya gụnyere ọrụ niile nke igwe tube, yana inwe mkpụrụedemede na-enweghị mpịachi. Igwe na -anakwere CAD iji mee ka ọrụ igwe rụọ ọrụ karia na akwa na -abụ ọkachamara na nkenke.
A na -arụpụta ọtụtụ akụkụ na ngwa site na igwe kwụ ọtọ dị elu, iji melite nkenke na izi ezi. A na -ekenye ngwa ngwa nke obi.
11.NO n'ogige atụrụ akara, na ojiji nke akwa bụ kpam kpam. Ọ DỊGHỊ akwa akwa, ị nwere ike belata ọnụ ahịa ya.
12.The rola usoro na-onwem na ọsọ-mgbanwe akụrụngwa iji jide n'aka na kpara agbanwe agbanwe. Na -arụ ọrụ nke ọma, na -egbughị oge na ike.
13. Igwe ahụ nwere ihe na -agbasa, iji chịkwaa esemokwu nke akwa ka ọ bụrụ mgbe niile. Wepụ sistemụ ahụ site na iji rola abụọ-igwe anaghị agbasawanye nke pụtara ìhè na ọ na-abawanye akwa.
14.Firmness na ogologo ndụ, na obere rasp, ọ nweghị ike imerụ akwa ngwa ngwa.
15.Corner nke dị n'ime akwa na -adị larịị site na osisi na -ese n'elu mmiri na akụrụngwa na -ese n'elu mmiri iji hụ na akwa dị larịị. Enwere ike ịkpụ akwa site na mma nchara dị mma iji mee ka ịdị nkọ dabara adaba.
Mpaghara itinye akwụkwọ:
Igwe a dabara na ihe ndị a kpara akpa dị ka usoro silk fiber, owu, ajị anụ dị ọcha na eriri kachasị mma. Ogologo ikpo nwere ike ime 8-20mm. Uwe akwa isi awọ nwere okpukpu abụọ ga -abụ akwa abụọ ogologo ogologo isi awọ site na iji mma dị na igwe na -egbutu ya, ya na egwuregwu nke ikpo siri ike na ikpo mma na jacquard, nwere ike bụrụ akpụkpọ anụ atụrụ mara mma ma dị iche iche ma ọ bụ zoo ụdị akwa akwa. A na -etinye ha n'ọrụ na akwa, akwa, akwa, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, akwa sofa, kapeeti, blanketị na ihe mkpuchi ụgbọ ala wdg.
Nke gara aga: Multifunctional Akwa ikpo Knitting Machine
Osote: Akwa ikpo obosara Jacquard Knitting Machine
Terry okirikiri Knitting Machine
Ntughari Terry okirikiri Knitting Machine
Igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ ugboro abụọ
Akwa ikpo obosara Jacquard Knitting Machine
Multifunctional Akwa ikpo Knitting Machine